Bata Vaverengi Vatengi uye Fekitori | China Bata Vaverengi Vagadziri
SLE5528 bata IC kadhi muverengi & munyori
1.SLE5528 bata IC kadhi muverengi & munyori 2.Certifiketi: SGS, EN71 3.Kutungamira nguva: 3days Inotsigira ISO-7816 Kirasi A, B uye C (5V, 3V, 1.8V) makadhi Inoita kuverenga nekunyora mashandiro pane ese microprocessor makadhi ane T = 0, T = 1 protocols Inotsigira mazhinji emhando dzinozivikanwa dzemakadhi kadhi mumusika: Makadhi anotevera iyo I2C bus protocol (yemahara memory makadhi) akadai se: Atmel: AT24C01 / 02/04/08/16/32/64/128 / / 256/512/1024 SGS-Thomson: ST14C02C, ST14C04C Gemplus: GFM1K, GFM2K, GFM4K, GFM8 ...
ACR3201 MobileMate Card Reader, chizvarwa chechipiri che ACR32 MobileMate Card Reader, chishandiso chakanakisa chaungashandisa nefoni yako. Kubatanidza matekinoroji maviri emakadhi kuita rimwe, rinopa mushandisi wayo mukana wekushandisa magineti emutsetse makadhi uye smart makadhi pasina imwezve mutengo.
ACR3901U-S1 ACS Yakachengeteka Makaroti Ekubata Kadhi Kadhi
ACR3901U-S1 ACS Yakachengeteka Bluetooth® Kiredhiti Kadhi Reader inosanganisa tekinoroji yazvino mupasi revadzidzi vema kadhi akachenjera neBluetooth® yekubatanidza. Iyi compact uye isina waya smart kadhi muverengi inounza pamwechete tekinoroji yehunyanzvi ine nyowani dhizaini kusangana nezvinodiwa zvakasiyana mune dzakasiyana smart kadhi yakavakirwa mashandisirwo achishandisa maBlue-anogoneswa michina senge smart mafoni uye mapiritsi.
ACR39U-UF Smart Card Reader ndeimwe yezvigadzirwa zveazvino zveACS zvinogadzirisa shanduko yemazinga eUSB. Uyu muverengi ane saizi yemichindwe anoratidza USB Type C chinongedzo. Iyo USB Rudzi rweC Connector inoratidzira inodzoserwa plug kutungamira uye waya tambo inokwana nhare kune zvigadzirwa zvigadzirwa zvigadzirwa zvemangwana smart kadhi zvinoshandiswa.
ACR39 PocketMate II ine USB Rudzi rweC Connector inomiririra ACS nyowani paradigm.Hapana yakakura kupfuura tsvimbo yeUSB, iri smart kadhi muverengi anokwanisa kutsigira inodaira smart kadhi kunyorera uchishandisa yakazara-saizi yekuonana smart makadhi. Inopa kukosha uye kuvimbika mashandiro kusangana nezvinodiwa zvako zvekuchengetedza.
ACR39 Pocketmate II ine Micro-USB Connector inoshanduka kuita smart kadhi muverengi kune yakazara-saizi yekuonana smart makadhi ane imwechete chete swivel inofamba. Uyu smart kadhi muverengi, isina kukura kupfuura tsvimbo yeUSB, inokwanisa kutsigira inoda kukumbirwa smart kadhi Inopa kukosha uye kuvimbika mashandiro kusangana nezvinodiwa zvako zvekuchengetedza.
ACR39U PocketMate II inotakurika smart kadhi kuverenga iyo inopfuura kusangana neziso. Iyo swivel-usb-go dhizaini inoichengeta yakachengeteka kana isiri kushandiswa. Muverengi anokwanisa kutsigira anodiwa macustomer kadhi kushandisa akazara-saizi yekuonana smart makadhi. Hapana yakakura kupfuura tsvimbo yeUSB, inoratidzira kuvimbika mashandiro uye nifty dhizaini.
ACR39U Smart Card Reader inoshandisa tekinoroji nyowani uye yazvino kune nyika yevaverengi vemakadhi akachenjera. Iyi compact smart kadhi muverengi inounza pamwechete hunyanzvi hwetekinoroji uye dhizaini yazvino kuzadzisa zvakakomba zvido zve smart kadhi- based application.